Wax Baan Tabayaa Dhalinyaroy ?
(Hadhwanaagnews) Friday, April 21, 2017 12:41:33
Dhinaca Siyaasada dalka ee madaxda sare ee qaranka ee loo yaqaano siyaasiin(politicians) waxaa ay u badan yahiin dhalin yaro marka laga reebo golaha guurtida oo intooda
Waxaa Jirta in intii Xukunka dalka uu hayey madaxweyne Axmed Maxamed (siiraanyo) ay dhalinyaradu fursad u heleeyen ka mid noqoshada mishiinada dhaqaajiya hawlaha qaranka, hadii ay noqoto jagooyinka Agaasimayaasha guud,Mareeyayaasha guud,Agaasimayaal waxeedyo iyo mareeyayaal waaxeedyo intaba cidna ma dafirikarto in xilaalkaasi yihiin kuwo saldhiga u ah maamulka dawlada ee hagida hawlaha qaranka waxaa aan dhan karaa malahayga 75% ama in ka badan waxaa xilalkaasi haya dad da’ahaan ka yar 60 jir.
Arinta labaad ee soo raacdaa waxaa weeyi gobolada iyo degmooyinka Somaliland Hadii ay noqoto Gudoomiyasha Gobolada iyo Degmooyinka waxaa haga oo madax ka ah
dad u badan dhalin yaro .
Dhinaca Siyaasada dalka ee madaxda sare ee qaranka ee loo yaqaano siyaasiin(politicians) waxaa ay u badan yahiin dhalin yaro marka laga reebo golaha guurtida oo intooda badani yihiin duqey da’ahaan ah 60 iyo wixii ka weyn.
Ururada aan dawliga ahayn ee muxaliga ah waxaa majaha u haya dhalinyaro, hadii ay noqoto ururada samafalka,ururada ganacsiga, kuwa caafimaadka iyo kuwa isgaadhsiinta warfaafinta iyo kuwo kale oo badan, ururada markaa aan leeyahay waxaa weeyaa baayac mushtariga waa weyn kuwa yar yar iyo ururada kale ee dhinacyada bulshada,samafalka iwm.
Jaamicadaha iyo Dugsiyada kale duwan oo yiguna ah ururada dhinaca aqoonta,waxbarashada,cilmi baadhista iwm iyagana waxaa haga waxa ay u badan yihiin dhalinyarada.
Culimada diinta ee ugu waaweyn dalka waxay u badan yihiin dad dahaan ka hooseeya 60 jir.
Intaasiba waa arimo xaqiiqo ah oo jira, markaa dhalinyaradu marmarsiiyo uma haysato sabab ay ku yidhaahdaan waxba gacanta kuma hayno haddii ay noqoto dhinaca maamulka,siyaasada,dhaqaalaha iyo bulshadaba(Waxbarashada caafimaadka,iwm).
Taas macnaheedu ma aha dhalinyarada oo dhami waa ay hayaan hawlahaasi balse in loo baahan yahay way ka hayaan marka loo eego magaca dhalin yarada.
Su’aasheydu waxa weeyaan waxbaa qaldan hadaba maxaa qaldan ee u baahan saxniin?
Waa laba mid waxaa aan tebayaa:
1- Dhalinyarada xilalkaasi haya oo aan ku habooneen shaqda loo dhiibey.
2- Dhalinyarada oo aan danba ka lahayn horumarinta dalkooda oo aan lahayba wadaniyad iyo naxariis ku aadan bulshadooda.
Labadaasi qodob ayaa aan maqaalkeyga dabe ku qaadaa dhigi doonaa aniga oo diirada ku saari doona dawladaha hoose,wasaaradaha,ganacsatada warbaahinta iyo qaybo badan oo ay ku jiraan xisbiyada siyaasada ururada bulshada,Haddii Allah(swt) ogolaado.